Fihaonan’ny mpamatsy vola : Efa firenena milamina ho an’ny fampiasam-bola i Madagasikara -
AccueilRaharaham-pirenenaFihaonan’ny mpamatsy vola : Efa firenena milamina ho an’ny fampiasam-bola i Madagasikara
15/06/2017 admintriatra Raharaham-pirenena 0
Tanterahina nanomboka omaly ary hitohy anio. Taorian’ny tany Paris tamin’ny taon-dasa, tanterahina atsy Prétoria- Afrika atsimo ny fihaonambe ho an’ireo mpamatsy vola sy mpampiasa vola ho an’i Madagasikara. Mitarika ny delegasiona mafonja, ahitana minisitra sy mpandraharaha maro, ny filoham-pirenena Hery Rajaonarimampianina izay nametraka tamin’ny kabary fanokafana fa « Firenena misokatra ho an’ny mpampiasa vola i Madagasikara. Ankoatra ny fifandraisana ara-tantara eo amin’ny firenena roa tonta, manamarika ny fiaraha-miasa ara-diplomatika eo amin’i Madagasikara sy Afrika Atsimo ny fanatanterahana ity fihaonambe ity izay hitondra any amin’ny famoronana tetikasa hiarahana », hoy izy tamin’ny lahateniny. « Ny ady amin’ny fahantrana sy ny fitondrana an’i Madagasikara ho firenena maoderina sy mandroso no tanjona. Taorian’ny krizy naharitra 55 taona, mila averina sy arenina ny zava-drehetra ao Madagasikara », araka ny fanamarihana noentiny. Mandritra ny roa andro haharetan’ny fihaonana, dia hiezaka ny hitondra fanazavana na fanamarihana amin’ireo mpampiasa vola sy mpamatsy vola liana amin’ny fampiasany ny volany eto Madagasikara ireo delegasiona ireo amin’ny sehatra misy azy avy. Jerena sy faritana ao anatin’ny roa andro ny tanjona, ny fanamby, ny laharam-pahamehana ary ny filana. « Mila mpamatsy vola maro ary mila ny fomba rehetra hitondrana ny hampandrosoana amin’ny sehatra rehetra izahay ka tsy nionona amin’ny firenena iray fa nanokatra ny sehatra ho an’ny firenena maromaro » hoy hatrany izy. Tanjona amin’ny fihaonana ny fandresen-dahatra ireo mpamatsy vola sy mpampiasa vola hitondra ny volany eto Madagasikara . « Misy ny fahavononana sy ny finiavana avy aminay amin’ny fanoritana ny lalàna hanatanterahana ireo tetikasa ireo ary amin’ilay endrika samy ahazoana tombontsoa », hoy hatrany ny filoham-pirenena.
Tanjon’ny fitondram-panjakana amin’ny fanatontosana ity fihaonamben’ny mpamatsy vola sy ny mpampiasa vola ity ny hisian’ny fivoarana ara-toekarena eo amin’ny firenena ka hanatrarana ny fampandrosoana maharitra. « Manana andraikitra goavana amin’ny fanarenana ireo vokatry ny krizy politika izahay. Ny fanatanterahana ireo tetikasa samihafa miainga avy amin’ny fihaonambe no hitondrana izay fampandrosoana ho an’ny firenena izay. « Efa miverina amin’ny firenena lalan’ny fampandrosoana i Madagasikara ary efa mipetraka ireo fototra manaraka ny rafi-panjakana, ny ara-politika , ary ny ara-diplômatika mba hisian’ny tontolo mendrika ho an’ny fampiasam-bola, na ho an’ny Malagasy na ho an’ny vahiny », hoy ny filoham-pirenena raha nandresy lahatra ireo mpamatsy vola sy mpampiasa vola tonga tamin’ity fihaonana ity.
Porofon’ny fisian’izay filaminana izay ny tahan’ny fiakaran’ny toekarena ho 4,5% ary heverina fa hiakatra hatrany amin’ny 6 na 7% izany.
Efa norarana teo aloha. Efa nanaovan’ny minisitera eo anivon’ny Prezidansa misahana ny Tetikasan’ny Filoham-pirenena sy ny Fanajariana ny Tany ary ny Fampitaovana (M2PATE) fidinana ifotony ihany koa ka namoahan’izy ireo didy fandrarana amin’ny fanotorana ny ...Tohiny
SADC : Tsena be ho an’ny sehatra tsy miankina